Xasan Sheekh oo sheegay in mucaaradka ay door ku yeelanayaan shirka Muqdisho | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Xasan Sheekh oo sheegay in mucaaradka ay door ku yeelanayaan shirka...
Xasan Sheekh oo sheegay in mucaaradka ay door ku yeelanayaan shirka Muqdisho
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyey xaflad qado sharaf ah oo loo sameeyeen Saciid Deni iyo Axmed Madoobe, ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horayntii sheegay in Muqdisho qof walba iska arki karo, islamarkaana ay joogaan magaaladoodii, isagoona xusay in isagu xitaa uu aadi doono gobolada kale ee Soomaaliyeed.
Wuxuuna tilmaamay in xiligan wixii ka dambeeya ay mucaaradka ay doorkooda ka ciyaari doonaan kulamada ka socda magaalada Muqdisho, xili ay ka maqnaayeen kulamadii Dhuusamareeb ee lagu kala kacay.
“Maalintii 1-aad iyo maalintii 2-aad iyo kulli waa furnayd gogoshu waana quruxsanaynaa laakiin hadda anaga dadkeenii Xamar joogey ee Dhuusamareeb aan tegin waaba geeddii waa idiin timi armayan idinka fakan ayaan ku jirnaa,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweyne Xasan ayaa carabka ku adkeeyay in kulan kasta oo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka iyo masiirka dalka ay uga qeyb gali doonaan goob kasta oo uu ka dhacayo, midaasi oo muujinaysa daneynta mucaaridka ee qabsoomida doorashooyinka.
“Taladii haday idiin soo dhowaatey armaa lugta ku dhegtaana waa nagu jirtaaye haddii Muqdisho la geeyo ama Garoowena ka hari mayno” ayuu yiri.
Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in ka hadalka doorashada laga billaabo xilliga doorashada, marka taas la isku raaco kadibna laga wada-hadlo nooca doorashada.
Ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimada ay xiligan leedahay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro arrimaha doorashooyinka oo weli lagu muransanyahay.